Fifindran-toerana an-tsokosoko :: Mitohy ny fitsoahan’ireo andian’ olona ny valanaretina coronavirus • AoRaha
Mila ampitomboin’ireo manampahefana isam-paritra, isaky ny distrika ary kaominina ny fanaraha-maso ny fivezivezena, indrindra avy any amin’ireo faritra ahitana sy tena iparitahan’ny tsimok’aretina « Covid-19 ». Maro ireo manandrana na mahavita mitsoaka mifindra any amin’ny toerana hafa ka mitera-doza ho an’ireo mpiara-monina, na dia eo aza ny fiarovan-tena sy fisorohana samihafa.
Loharanom-baovao iray avy amin’iny distrikan’Anjozorobe iny, ohatra, no mitoroka ny fahamaroan’ireo andian’olona mitsoaka avy any amin’ny faritra Alaotra Mangoro, Ambatovy ary avy any Toamasina ka mandalo ao amin’ity distrika ity. « Misy olona tonga foana isan’andro. Vao tamin’ny alina (Ndlr : afak’omaly) no nisy olona efa ho telopolo, avy nanao vary tany Alaotra Mangoro no nandeha an-tongotra nilaza fa hody any Antsirabe. Misy ny sakana saingy any anaty ala no lalan’izy ireo. Tsy tazonina eto an-tanàna fa alefanay mandeha avy hatrany izy », hoy io loharanom-baovao io.
Taorian’ny fisian’ilay renim-pianakaviana namoy ny ainy teo am-piterahana noho ny fihomboan’ny tsimok’aretina « Covid-19 » tao aminy no ampiakaran’ireo mponina sasany feo miainga any Anjozorobe. Soa fa iny tranga iray iny ihany, hatreto, no voamarina fa marary sady matin’ny valanaretina tany amin’io distrika io. Mandeha rahateo ny fanadihadiana tamin’ny fiavian’ny fifindran’ny tsimok’aretina tamin’ ilay renim-pianakaviana. Na dia noheverina fa salama tsara tsy tokony ho nahazo ny « Covid-19 » tamin’ny reniny maty kosa aza ilay zaza menavava, izay avotra soa aman-tsara taorian’ny fandidiana, dia fantatra fa hanaovana fitiliana ihany io zazakely io. Toy izany koa ireo havan’iry vehivavy, 20 taona, maty teo am-piterahana teny amin’ny hopitaly Anosy Avaratra iry, anio.
Ho fisorohana ny fiparitahan’ny tsimok’aretina hatrany no antony hanatanterahana an’izany fitiliana izany. Nolazain’ny loharanom-baovao avy any Antanetibe Anativolo, distrikan’Anjozorobe, fa mivezivezy be ny mponina any amin’ity tanàna ity. Maka entana aty Antananarivo dia miverina any an-toerana indray avy eo. Olona maro ihany koa no nifanerasera tamin-dRatompokovavy noho izy mikarama mantsaka ranon’olona sady manao asa irakiraka.
« Nisaina avokoa ireo nifanerasera taminy, omaly. Rahampitso (Ndrl: anio) vao hanao ny fitiliana an’ireo havany akaiky izahay. Olona fito ambin’ny folo izy ireo ka tafiditra ao anatiny ilay zazakely. Misy mpiasan’ny fahasalamana fito, teto Anjozorobe, izay nandray an-tanana azy no tsy maintsy hanaovana an’izany ihany koa », hoy ny mpitsabo iray avy any Anjozorobe. Nohamafisiny fa salama tsara ilay zaza, hatreto.
An-kilany, nakatona nanomboka afak’omaly ny hopitalin’Anosy Avaratra. Nofendrahana ranompanafody ny toeram-pitsaboana. Tsy maintsy nanaovana fitiliana avokoa ireo mpiasan’ny fahasalamana rehetra iraika amby enimpolo tao amin’ny hopitaly. Amin’ny 8 jona ho avy izao kosa vao hisokatra ny tobim-pitsaboana.
Fotsaboana covid-19/Tanàna Voara Hatokana ireo marary manaiky tsindrona sy vitamina C
Fanampiana ny sahirana :: Horaisina ny fitarainan’ireo tsy nahazo Tosika Fameno